Ubuye ngengoma entsha uDJ Twitty
UDJ Twitty ubuye ngengoma entsha ethi Lengane Isithombe: SITHUNYELWE
FANELESIBONGE BENGU | November 7, 2019
UZIFANISA nozelwe kabusha uDJ Twitty okhiphe ingoma ethi Lengane.
UTwitty, oqale ukugqama eminyakeni edlule esaqopha enkampanini kaDJ Tira, i-Afrotainment, uthe usengumuntu oshintshe kakhulu kunasekuqaleni.
“Ngenze amaphutha amaningi ngisakhula kodwa manje ngiqala kabusha yonke into. Sengayeka ngisho utshwala sengigxile emsebenzini. Anginayo ngisho nentombi ngakho le ngoma ngeyokuqala sengishintshe impilo,” kusho uTwitty.
Lo DJ owake waboshelwa ukutshontsha iwayini, ukhipha le ngoma nje wagcina ngo-2016 ngethi Impilo eThekwini.
“Engomeni ngisebenze noBless noPrince baseMpangeni. Bangabaculi bokuqala ukuthi ngibasayine enkampanini yami iTwisted Concepts njengoba bengingedwa sonke lesi sikhathi. Ingoma yabo izolandela kungekudala,” kuchaza uTwitty.
NgoLwesine ngeledlule ubenze umcimbi wokwethula i-video eKingston Beach Club, eKings Park Stadium.
Uveze ukuthi uhlela nokuhambela ezinye izindawo KwaZulu-Natal eyokwethula kuzona ingoma yakhe.
“Ngizoya kwaMax, eMashamplane, eNewcastle nase-Estcourt,” kusho uTwitty.
Uthe le ngoma indlalela i-albhamu ahlela ukuyikhipha ngePhasika ngonyaka ozayo.
“Okwamanje bekuwukubuyisa igama lami emqondweni wabantu bazi ukuthi ngisekhona emuva kokuthula kusukela ngo-2016. Ngonyaka ozayo ngizobe sengikhipha i-albhamu ephelele. Sengiyayihlanganisa. Kunengoma engiyenze noLin Dough osayinwe wuDJ Merlon.”